Social – Page2– Gentleman Magazine
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ ၀ိုင္းပယ္ျခင္းကို ခံရႏိုင္သည့္အေၾကာင္းရင္း (၆)ခု[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup] [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ၀ိုင်းပယ်ခြင်းကို ခံရနိုင်သည့်အကြောင်းရင်း (၆)ခု (Unicode) သင့်အနေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေရပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေသလို့ ခံစားနေရပါသလား? ရုံးခန်းထဲမှာ ကိစ္စတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် နောက်ဆုံးမှသိရတဲ့သူဟာ သင်ဖြစ်နေပါသလား?
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ေျပာသမွ်စကား တည္ႏိုင္ေစဖို႔…. [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ပြောသမျှစကား တည်နိုင်စေဖို့…. လူတွေက စကားတွေ အများကြီးပြောကြပါတယ်။ ပြောတဲ့အတိုင်း မဖြစ်တာကလည်း များပါတယ်။ လေးစားယုံကြည်ထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်နဲ့ အခြားသူတွေကို အဓိကကွဲပြားခြားနားသွားစေတဲ့အချက်က ပြောသမျှစကားကို တာဝန်ယူနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ကြောင့်သေ၊ လက်ကြောင့်ကြေဆိုသလိုပါပဲ
ေက်ာင္းေနဖက္သူငယ္ခ်င္းေတြက တစ္သက္တာသူငယ္ခ်င္းျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေက တစ်သက်တာသူငယ်ချင်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ (Unicode) ကျောင်းတက်ရတဲ့ ကျောင်းသားဘဝဟာ သင့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေဖြစ်မှာပါ။ ဘဝအတွက် စိုးရိမ်စရာသိပ်မများတာကြောင့် ဆိုတာထက် ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေပါ။ သူတို့နဲ့အတူ ရယ်မောပျော်ရွှင်ရမယ်၊ ပထမဆုံးတဖက်သတ်ချစ်သူအကြောင်း ဝေမျှခွင့်ရမယ်၊
13/06/2017 14/06/2017 escapetravelmagazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ယုံၾကည္အားကိုးထိုက္တဲ့ ပုဂိၢဳဟ္တစ္ေယာက္လား (Zawgyi)[showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ယုံကြည်အားကိုးထိုက်တဲ့ ပုဂိ္ဂုဟ်တစ်ယောက်လား ယနေ့ခေတ်မှာ လူတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားကြတဲ့အရာတစ်ခုက ယုံကြည်အားထားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မိဘ၊ ချစ်သူရည်းစား၊ အလုပ်ရှင် စတဲ့ဘယ်သူကပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်အပေါ်မှာ ယုံကြည်အားကိုးထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးှရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင်ကရော
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အခ်က္(၁၅)ခု [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ အချက်(၁၅)ခု (Unicode) လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ အလုပ်ရှင် ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ၀န်ထမ်းတွေ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက ရွံ့ကြောက်ပြီး မလေးစား၊ မယုံကြည်ကြတဲ့ လူမျိုးတွေရှိပါတယ်။
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အာ႐ုံကိုဖမ္းစားႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို Chat မလဲ [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်အောင် ဘယ်လို Chat မလဲ နည်းပညာတွေထွန်းကားနေတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ ချစ်မှုရေးရာကိစ္စတွေ၊ အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုမှုတွေကလည်း လူချင်းတွေ့မှ လုပ်ဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူမှုကွန်ယက်တွေကတဆင့်
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]သင့္အတြက္ မွန္ကန္ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္တဲ့ အခ်က္(၅)ခု [showhide type=”links” more_text=“>>>Unicode<<<“ less_text=”Hide Unicode “] သင့်အတွက် မှန်ကန်ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်တဲ့ အချက်(၅)ခု အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ရောက်တိုင်း အလုပ်သွားဖို့ကို စိတ်မပါ လက်မပါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သင့်အလုပ်မှာ စိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှု မရှိဘူးဆိုတာ